Etu ị ga-esi na-azụ ahịa azụmahịa na Twitter na akwalite Tweets | Martech Zone
Monday, September 1, 2014 Na Tọzdee, Septemba 2, 2014 Douglas Karr
Twitter na-enye ugbu a dịgasị iche iche nke mkpọsa iwu ihe na-esote, ịkwọ ụgbọala na ntụgharị na saịtị gị, wụnye ngwa, nweta ndu, ma ọ bụ kwalite tweets ụfọdụ.
Akwalite Tweets gaa n'ihu na-apụta na usoro iheomume m na Twitter na ngwa nke Twitter. Ahia gi kwesiri igbalite Omume kachasị mma nke Twitter, ma ọ bụrụ na ị na-akwụ ụgwọ iji kwalite Tweet, enwere ihe ụfọdụ ị ga - eme iji melite pịa-site na ọnụego Tweets akwalitere.
The interface maka Promo Tweets na-enye onye ọrụ ohere ịkọwa mkpọsa ha, debe ụbọchị nke nkwalite Tweet, ma họrọ ndị na-ege ntị ịchọrọ.
a ozi sitere na Social Samosa na-enye usoro njikarịcha kachasị mma ị nwere ike ịme mgbe ị na-akwalite Tweets iji mekwuo njikọ ahụ. Tweets dị mkpụmkpụ na-arụ ọrụ ka mma ma na-agbakwunye havehtags, kwuru, njikọ, foto na vidiyo na-anya njikọ aka karịa. Nanị ịgbakwunye akara mkpuchi ga- mee ka mgbasa ozi Tweet kwalite site na 43%!
Tags: akara ngosiesi akwalite otu tweetinfographickwalitere tweetsnjikarịcha tweetAtụmatụ nkwalite tweetmgbasa ozi twittertwitter maka azụmahịaHashtag twitterOzi infographicnjikọ twittertwitter kwurufoto twitternkwalite twittervidiyo twitter